Zvirongwa zvewebhu - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Webhu Kunyorera Yekuvandudza Service
Webhu application yekuvandudza inoreva kugadzirwa kwemaapplication pane iri kure server iyo inowanikwa kuburikidza neinternet. Webhu kuvandudza app yakashanduka nekukurumidza pamusoro pemakore gumi apfuura. Yetsika dandemutande app kusimudzira kwaive nekugadzira akaomarara emapeji ewebhu akagoneswa neinternet, zvisinei, isu ikozvino tauya nenzira refu. Kuuya kweCMS (Content Management System) uye dandemutande budiriro masisitimu akagadzira yakagadziriswa webhu kuvandudza kushanda, nyore uye inotaurika. Anoshanda webhu kunyorera inogona kuwedzera kune rako bhizinesi mashandiro, shanda seyanopindirana chishandiso pakati pebhizinesi nevatengi, kurerutsa kupinda kwedata, uye nekupa iyo yakazara yekuwedzera kune rako bhizinesi. Nhasi, tsika webhu kuvandudza ine yakawanda mikana yekushandira mabhizinesi uye kushandisa simba rayo kunopa rako bhizinesi kuwedzera kumucheto.
Webhu Kubudirira Mapurogiramu
Zvishandiso zvewebhu zvakashanduka zvinoshamisa. Iye zvino tava kukwanisa kukudziridza huwandu hweshanduro dzewebhu dzinogona kugadzirisa matambudziko akasiyana zvakapusa uye zvine mutsindo. Chinangwa hachisisiri chekuvandudza mashandiro asi kupa mhinduro kumabasa epasi ekudzokorora uye kudzikisira kuedza kwevanhu. Hedzino dzimwe mhando dzewebhu webhu dzatinogadzira.
1. Dynamic Webhu Kunyorera:
Iyo tuli peji rewebhu rinoburitsa iro rakafanana ruzivo kune vese vashandisi. Aya mapeji, senge madhairekitori epamhepo, anoshanda nenzira imwechete kune vese vashandisi. Kune rimwe divi, ine simba webhu application mashandiro anoenderana nezvakakumbira zvinoiswa nemushandisi. Zvemukati zvinounzwa nemasaiti aya zvinoenderana nezviito zvevashandisi uye nekudaro zvinosiyana kune yega yega mumwe munhusemuenzaniso, masocial media masaiti.
2. E-commerce Platform:
Iyo e-commerce boom yakakonzera kuwedzera kukuru muhuwandu hwee-commerce mapuratifomu aripo nhasi. Kubva Magento kuenda WooCommerce kuenda kuShopify, pa NewGenApps isu nyanzvi mukuvandudza kweimwe yeaya mapuratifomu. Yedu yakagadzirirwa e-commerce mhinduro dzinosanganisirawo ekurudzira masisitimu uye ekufanofungidzira modhi iyo inogona kuwedzera kukurudzira kukuru kune yako e-commerce manejimendi kugona.
3. Portal Web Kunyorera:
Kusiyana neyechinyakare webhu kunyorera, masuo anotaridzirwa sedura re data kubva kune dzakasiyana zviwanikwa. Iyo webhu portal inokamura, inopfupisa uye inonyora zviwanikwa zvichibva pane zvakasarudzika nzira uye inoratidza ruzivo rwakakodzera kumushandisi. Inopawo zvinoshanda sekutsvaga mamwe mawebhusaiti, ruzivo rwemamiriro ekunze, mareti ezvitoro nezvimwewo.Saka, masosi anoshanda senzvimbo yemagetsi inogonesa vashandisi kuti vaongorore ruzivo rwakakosha pawebhu. Mienzaniso yakakurumbira yenzvimbo dzakadai dzinosanganisira Yahoo, Wikipedia nezvimwe.
4. Webhu Kunyorera neCMS:
Iyo yemukati manejimendi system (CMS) ndeye GUI interface iyo inogonesa zvemukati kugadzirisa uye kubatanidza. Ndichiri kuvandudza yetsika webhu kunyorera 70% yekodhi yacho inopinda mukubatanidza mashandiro eCMS. Yepamberi CMS senge WordPress, Drupal, Joomla nezvimwe vakatsigira izvi zvakaoma kusvika padanho rakakura. Iye zvino, chishandiso chinogona kugadzirirwa kutora chero yeCMS sehwaro uye akasiyana mabasa anogona kuitwa pamusoro pavo. Facebook pachayo yakavakirwa paWordPress uye ichiri imwe yeanonyanya kufarirwa mawebhu kunyorera nhasi.
5. Kambani Inotarisana / Kuteedzera Kwevatengi.
Iyo kambani yakatarisana newebhu kunyorera inovavarira kuunza mhinduro kumatambudziko emukati emakambani uye zviitiko. Aya maficha anosanganisira eprojekti manejimendi manejimendi, zvemukati manejimendi mhinduro nezvimwe.Kune rimwe divi, vatengi-vakatarisana kunyorera vanovavarira kushanda sevamiriri vekambani kune vatengi vavo. Aya mafomu anogadza mutsara we kutaurirana uye tarisa kugadzirisa matambudziko mutengi uye nekuvandudza ruzivo. Semuenzaniso, online tafura yekubatsira, My Starbucks Idea app nezvimwe.
Nei Sarudza NewGenApps ?
Heino chikonzero nei uchifanira kusarudza NewGenApps yako webhu kunyorera kusimudzira: Nyanzvi yezinga reruzivo ruzivo panguva yekuvandudza yakagadziriswa webhu kunyorera Vagadziri vane ruzivo avo vakashanda pane mamwe anozivikanwa uye achikwira ekuvandudza masisitimu uye mapuratifomu. Nhoroondo yakapfuura yekupa ekucheka-kumucheto mhinduro kumatambudziko anosanganisira kushandiswa kwema advanced algorithms senge machine learning uye kushandisa michina. Kugona kuyera kuvandudza zvinoenderana nekuchinja zvinodiwa nevatengi. Kugona kushanda neakaonda kutanga-up maitiro ekuvandudza.